The Diversity Immigrant Visa Program is also called the DV Program, the visa lottery, or the green card lottery. Every year from 1995 သို့ 2020, the USA awarded 50,000 visas through the program. ပြည်သူ့ကျပန်းရွေးချယ်ရေးကရွေးချယ်ရ (အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်) in the visa lottery. If you winavisa, သငျသညျအသကျရှငျနိုငျသညျ, အလုပ်, and study in the USA. ပြီးနောက်5အနှစ်, you can apply for citizenship.
Applicants must submit entries for the DV-2021 program electronically at dvlottery.state.gov between noon, Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4), ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 2, 2019, and noon, Eastern Standard Time (EST) (GMT-5), အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 5, 2019.
သင် ... ရမည် complete the (DS-260) application online during the enrollment period of October2to November 5, 2019. You cannot submit your entry at other times.
You must be fromacountry မဟုတ် listed below.
Diversity visas go to people from countries who have not sent many immigrants to the USA in previous years. ဖြည့်စွက်ကာ, no single country may receive more than7% of the available DVs in any one year.
For DV-2021, natives of the following countries are မဟုတ် လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ:
If yes, you may claim the country of birth of one of your parents if it isacountry whose natives are eligible for the DV-2021 program. For more details on what this means, ယင်းကိုကြည့်ပါ visa lottery’s official frequently asked questions.
There are many websites and people that try to trick you into giving money to getaUS visa. Do not believe them. You do not need to pay. The Department of State advises you to apply without one of these “visa consultants.” ဥပမာ,awebsite such as www.usgreencardoffice.com will charge you $98 to file your application. Other websites pretend they official government websites. သတိရ:
တစ်ဦးထက်ပို application ကိုလုပ်မနေပါနဲ့. You will be excluded from the lottery.
သငျသညျပုံစံပေါ်မှာရှိသမျှ entries တွေကိုဖြည့်စွက်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
You can read and download visa instructions in many languages from the Department of State. (မှတ်စု: these are 2020 instructions. We will update them with 2021 instructions when they become available.)
စပိန် / စပိ
ဗီယကျနမျ / ဗီယကျနမျ
The information on this page is taken from the ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.